Ity fizarana voalohany ity Fisainana sy faniriana dia natao hampidirana anao amin'ny sasantsasany amin'ireo lohahevitra sedrain'ny boky. Maro amin'ireo lohahevitra no toa hafahafa. Ny sasany amin'izy ireo dia mety mahagaga. Mety ho hitanao fa mandrisika ny saina izy ireo. Rehefa mahazatra ny eritreritra ianao ary mieritreritra ny lalanao amin'ny boky, dia ho hitanao fa mihamazava hatrany izany, ary ianao dia eo am-pandinihana ny fahatakarana ny fototry ny fototra sasany fa tsy ny zava-misy miafina momba ny fiainana-ary indrindra indrindra momba ny tenanao.
Ny boky dia manazava ny tanjon'ny fiainana. Tsy natao hahitana fahasambarana izany tanjona izany, na eto na any aoriana. Tsy tokony 'hamonjy' ny ain'ny olona koa izy. Ny tena tanjon'ny fiainana, ny tanjona izay hanome fahafaham-po ny hevitra sy ny fisainana, dia izao: ny tsirairay amintsika dia hahatsiaro tsikelikely tsikelikely hatrany amin'ny fahatsiarovan-tena; izany hoe, mahatsapa ny natiora, ary ao ambadiky ny natiora. Amin'ny alalan'ny natiora dia midika fa izany rehetra izany dia azo tsapaina amin'ny alalan'ny eritreritra.
Mampiditra anao amin'ny tenanao koa ilay boky. Izy io dia mitondra anao ny hafatra momba ny tenanao: ny maha-miafina anao miaina ny vatanao. Angamba ianao efa namaritra ny tenanao sy ny vatanao; ary rehefa miezaka mieritreritra ny tenanao ianao dia mieritreritra ny mombamomba ny vatanao. Amin'ny herim-pahazotoana nasianao resaka momba ny vatanao ho toy ny "izaho", toy ny "tenako". Ianao dia zatra mampiasa ireo teny toy ny hoe "fony aho teraka", ary "rehefa maty aho"; ary "Izaho dia nahita ny tenako tao amin'ny fitaratra", ary "nitsahatra tamin'ny tenako aho", "nopetako ny tenako," sy ny sisa, raha ny tena izy dia ny vatanao izay lazainao. Mba hahafantaranao izay tokony ho anao dia tsy maintsy hitanao mazava tsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny tenanao sy ny vatanao iainana. Ny zavatra ampiasainao ny teny hoe "vatako" amin'ny fomba tsotra amin'ny fampiasanao ny iray amin'ireo voatanisa ireo dia manoro hevitra fa tsy tanteraka tsy voaomana ianao mba hanasongadinana izany.
Fantatrao ny nahatongavanao teto amin'ity izao tontolo izao ity; fa ahoana kosa no nahaterahanao tao amin'ny vatanao izay tsy fantatrao? Tsy niditra tao ianao mandra-pahatongan'ny fotoana nahaterahanao; herintaona, angamba, na taona maromaro; fa raha izany, dia tsy mahalala na inona na inona ianao, satria ny fahatsiarovanao ny tenanao dia tsy mbola nanomboka taorinao rehefa tonga tao amin'ny vatanao. Fantatrao ny momba ny zavatra noforonin'ny vatanao miovaova hatrany; fa inona kosa no tsy fantatrao? Tsy mbola fantatrao izay ao amin'ny vatanao. Fantatrao ny anaran'ny tenanao izay manavaka ny vatan'ny hafa; ary izany dia nianaranao ho toy ny anaranao. Ny zava-dehibe dia ny tokony hahafantaranao fa tsy ny toetra maha ianao anao, fa ny maha ianao anao amin'ny maha-olona anao-ny fahatsiarovanao ny tenanao, saingy tsy mbola fantatrao toy ny tenanao, ny maha-tsy fantatra anao. Fantatrao fa velona ny vatanao, ary manantena ianao fa ho faty izy; Satria zava-misy ny fahafatesan'ny vatan'ny olombelona rehetra amin'ny fotoana. Ny vatanao dia manana fiandohana, ary hanana fiafarana izany; Ary hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia miankina amin'ny lalàn'izao tontolo izao amin'ny tranga, ny fiovana, ny fotoana. Kanefa ianao dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna izay misy fiantraikany amin'ny vatanao. Na dia manova ny mombamomba azy matetika aza ny vatanao raha oharina amin'ny fiovanao ny akanjo anaovanao izany, dia tsy miova ny maha izy anao. Ianao dia mitovy aminao.
Rehefa manontany tena ianao hoe: "Inona no fantatro fa izaho?" Ny fisian'ny maha-izy anao dia mety hamaly anao amin'ny fomba toy izao: "Na inona na inona maha-izaho ahy, fantatro fa farafaharatsiny saina aho; Fantatro fa farafaharatsiny ny hoe mahatsiaro tena. "Ary raha mitohy izao dia mety hiteny ianao hoe:" Fantatro izao fa izaho no izy. Dia fantatro koa fa Izaho no Izy; ary tsy misy hafa. Tsapako fa io maha-izaho ahy io no tsapako-io fiheverana miavaka sy maha-samihafa izay tsapako io-dia tsy miova mandritra ny androm-piainako, fa ny zavatra hafa rehetra fantatro dia toa miovaova foana. "Rehefa mandinika izany ianao dia mety hiteny hoe:" Mbola tsy fantatro hoe inona io mistery tsy miova ahy io; Fa fantatro fa ao anatin'ity vatan'olombelona ity, izay mahatsiaro ahy mandritra ny ora fiandrasako, misy zavatra azo tsapain-tanana; zavatra izay mahatsapa sy maniry ary mieritreritra, saingy tsy miova izany; zavatra iray izay maniry sy manosika ity vatana ity hanao asa, nefa mazava ho azy fa tsy ny vatana. Mazava fa ity zavatra mahatsiaro ity, na inona na inona izany, dia izaho. "
Ny fahatsapanao dia zavamananaina; fitambaran-javatra tsy hita maso; Ireo hery manomboka izay manenika ny rafitra manontolo amin'ny vatanao; Izy ireo dia fikambanana izay, na dia tsy manam-pahaizana aza, dia mahatsapa ho toy ny asany. Ny fahatsapanao ho toy ny foibe, ny fitaovan'ny fahatsapana eo amin'ny zava-manan'aina sy ny masin'olombelona izay ataonao. Ny fahatsapana dia ambasadera natiora ho any amin'ny fitsarana. Ny vatanao sy ny sainao dia tsy manana fahefana an-tsitrapo; tsy mihoatra noho ny fonon-tanana izay ahafahanao mahatsapa sy miasa. Fa ity hery ity dia ianao, ny mpandraharaha, ny tena fahatsiarovan-tena, ilay mpanamboatra azy.
Raha tsy misy anao, ilay mpankafy, dia tsy mahavita na inona na inona ny milina. Ny fanao amin'ny tsy fanaovana an-tsirambina ny vatanao-ny asa fanorenana, ny fikojakojana, ny fantsom-batana, ary ny toy izany-dia entin'ny otrik'aretina isaky ny mandeha ho azy sy miaraka amin'ny masom-panovana lehibe. Ny asan'ny natiora ao amin'ny vatanao dia manelingelina tsy an-kijanona amin'ny fisainanao tsy misy lanjany sy tsy misy ifandraisany: ny asa dia voasariky ny tsy fitoviana sy ny tsy fisian'ny fihenjanana ara-batana amin'ny alàlan'ny famelana ny fihetseham-ponao sy ny fanirianao hanao asa tsy misy fanaraha-maso azo antoka. Noho izany, mba hahafahan'ny natiora hamela ny famerenana ny milina tsy misy fanelingelenana ny eritreritrao sy ny fihetseham-po, dia omena ny famoahana azy tsindraindray; Ny natiora ao amin'ny vatanao dia manome fa ny fifamatorana izay mihazona anao sy ny fihetseham-po dia indraindray dia mazavazava, na amin'ny ampahany na manontolo. Ny fialan-tsasatra na ny famelana ny fahatsapana dia matory.
Na dia matory aza ny vatanao, dia tsy mahakasika anao izany; Amin'ny lafiny iray dia ianao no miala amin'izany. Fa isaky ny mamoha ny vatanao ianao dia tsapanao avy hatrany fa ny tena "I" no nahatonga anao talohan'ny nandaozanao ny vatanao tamin'ny torimaso. Ny vatanao, na mifoha na matory, dia tsy mahalala na inona na inona. Izay mihevi-tena ho zavatra, dia ny tenanao, dia ny mpanao ny asan'ny tananao. Miharihary izany rehefa mieritreritra ianao fa tsy mieritreritra raha matory ny vatanao; Farafaharatsiny, raha mieritreritra ianao mandritra ny fotoana torimaso izay tsy fantatrao na tsaroanao, rehefa mamoha ny sainao ianao, dia inona no noeritreretinao.
Ny torimaso dia lalina na nofy. Ny torimaso lalina dia ny toe-piainana izay itondranao ny tenanao, ary ao anatin'izany ianao dia tsy miraharaha ny saina; Ny fanjakana no nahatonga ny fahatsapana tsy nitsahatra niasa noho ny tsy nampifanaraka tamin'ny hery nananan'izy ireo, izay hery anananao, ilay mpankafy. Ny nofy dia ny toetry ny fitazonana ampahany; ny toe-piainana izay mahatonga ny eritreritrao hiverina amin'ny zavamiaina ivelan'ny natiora mba hiankin-doha amin'ny natiora, izay mifandray amin'ny lohahevitr'ireo zavatra hita taratra mandritra ny fahatsapana. Rehefa aorian'ny torimasony lalina dia averinao miditra indray ny vatanao, dia mamoha ny saina ianao ary manomboka miasa amin'ny alalan'izy ireo indray ho toy ny mpilalao mahay indrindra ny milina masinao, ary mieritreritra sy miteny ary mihetsika toy ny fahatsapana- faniriana izay ianao. Ary hatramin 'ny fahazarana mandritra ny androm-piainanao, dia manondro avy hatrany ny tenanao sy ny vatanao ianao: "Efa natory aho", hoy ianao; "Mifoha aho izao."
Fa ao amin'ny vatanao sy ao amin'ny vatanao, dia mifoha sy matory isan'andro isan'andro; amin'ny alalan'ny fiainana sy amin'ny fahafatesana, ary amin'ny alalan'ireo fanjakana aorian'ny fahafatesana; ary avy amin'ny fiainana amin'ny fiainana amin'ny fiainanao manontolo-ny maha-izy anao sy ny fahatsapanao ny maha-izy anao. Ny maha-anao anao dia tena zava-misy, ary eo foana miaraka aminao; Fa zava-miafina tsy takatry ny sain'ny saina izany. Na dia tsy takatry ny saina aza izy io fa mbola mahatsapa ny fisiany. Mahatsapa izany ho toy ny fahatsapana ianao; Manana fahatsapana maha-izy anao ianao; fahatsapana ny fahamendrehako, ny fitiavan-tena; tsapanao, tsy misy fanontanina na fanamarihana, fa ianao dia mitovy amin'ny an'ny tenanao izay mitohy amin'ny fiainana.
Ilaina ny mahafantatra momba ny fialana aina sy ny anjarany, raha tsy izany dia tsy azo atao ny mitaky ny fahasamihafan'ny toetra sy ny toetran'olombelona. Mba hanamafisana fa ny tsy fitoviana eo amin'ny fahaterahana sy ny fitobiana, ny harena sy ny fahantrana, ny fahasalamana sy ny aretina, vokatry ny tsy fahampiana na ny zom-pirenena dia fanelingelenana ny lalàna sy ny rariny. Ankoatra izany, mba hampisehoana ny faharanitan-tsaina, ny saina, ny famoronana, ny fanomezam-pahasoavana, ny fahaiza-manao, ny hery, ny hatsaran-toetra; na ny tsy fahalalana, ny fahadisoam-panantenana, ny fahalemena, ny malain-kibony, ny herisetra, ary ny halehibiazina na ny maha-bitika azy ireo, dia avy amin'ny lova ara-batana, dia manohitra ny fahatsapana sy ny antony. Ny fifamatorana dia mifandray amin'ny vatana; Fa ny toetran'ny olona kosa no manao ny toetra. Ny lalàna sy ny rariny dia manapaka ity izao tontolo izao amin'ny fahaterahana sy ny fahafatesana, raha tsy izany dia tsy afaka manohy ny fianarany; ary ny lalàna sy ny fahamarinana dia miorina amin'ny raharahan'ny olombelona. Nefa ny vokany dia tsy voatery avy hatrany ny antony. Ny famafazana dia tsy manaraka avy hatrany ny fijinjana. Toy izany koa ny vokatry ny hetsika na ny eritreritra iray dia mety tsy hiseho raha tsy mandritra ny fotoana maharitra. Tsy azontsika jerena ny zava-mitranga eo amin'ny eritreritra sy ny fihetsika ary ny vokatr'izany, mihoatra noho izay azontsika jerena hoe inona no mitranga eo anelanelan'ny famolahana fotoana sy fijinjana; Fa ny tsirairay ao amin'ny vatan'olombelona dia mahatonga ny lalànany ho toy ny anjarany amin'ny eritreriny sy ny zavatra ataony, na dia mety tsy mahatsapa izany aza rehefa mandidy ny lalàna izy; ary tsy mahafantatra izany raha atao hoe feno ny prescription, toy ny anjara, amin'izao fotoana izao na amin'ny fiainana ho avy eto an-tany.
Ny andro sy ny fiainana dia samy mitovy avokoa; Fotoana maharitra izy ireo amin'izao fotoana misy ny fisian'ny mpanao asa soa izao, ary mibanjina ny kaontiny amin'ny fiainana. Ny alina sy ny maty koa dia samy hafa: rehefa mitsambikina ianao mba hamela ny vatanao hitsahatra sy hatory, dia mandalo toe-javatra iray tena mitovy amin'ny anao rehefa mandao ny vatana rehefa maty. Ny nofinofinao amin'ny alina dia tokony ampitahaina amin'ny fanjakana taorian'ny nahafatesany, izay nandalovanao matetika: roa ny fizotran'ny asa ataon'ilay mpankafy; Raha miaina amin'ny eritreritrao sy ny fihetsikao ianao, mbola mazoto miasa hatrany ny fihetsikao, fa any amin'ny faritry ny natiora. Ary ny vanim-potoanan'ny torimaso lalindalina, rehefa tsy miasa intsony ny fahatsapana-ny toetry ny fanadinoana izay tsy misy fahatsiarovana na inona na inona-mifanaraka amin'ny vanim-potoana tsy misy eo aminao izay miandry eo amin'ny tokonan'ny tontolo hita maso mandra- Mifandray amin'ny eritreritrao amin'ny vatana vaovao iray: ny vatan'ny zazakely na ny vatan'ny ankizy izay noforonina ho anao.
Ny mistery lehibe dia ny tena maha-tena anao-izany Fitiavana lehibe izay tsy ao amin'ny vatanao; tsy ao anatin'ity tontolo feno fahaterahana sy fahafatesana ity; fa izay tsy mety maty ao amin'ny tontolo manerantany dia ny fanatrehanao miaraka amin'ny fiainanao mandritra ny androm-piainanao, amin'ny alahelonao amin'ny torimaso sy ny fahafatesana rehetra.
Ny fikarohana mandritra ny androm-piainan'ny olombelona amin'ny zavatra iray mahafa-po dia ny fikatsahana ny tena tena marina; ny maha-izy azy, ny fitiavan-tena sy ny fahamendrehana, izay tsapan'ny tsirairay, mahatsapa sy maniry ary te hahafantatra. Noho izany ny tena tena dia tokony hantsoina hoe Fahalalahana momba ny tena, ny tena zava-kendrena, saingy tsy tadidin'ny olombelona tadiavina. Ny faharetana, ny fahatanterahana, ny fahatanterahana, izay tadiavina nefa tsy hita amin'ny fifandraisana amin'ny olombelona sy ny ezaka. Ankoatra izany, ny Tena Tena dia mpanolotsaina sy mpitsara mandrakariva izay miteny ao am-po toy ny feon'ny fieritreretana sy ny adidy, amin'ny maha-rariny sy ny anton-javatra, toy ny lalàna sy ny fahamarinana-izay tsy misy olona tsy mihoatra noho ny biby.
Plato, izay angamba olo-malaza sy solontenan'ny filozofa Gresy, dia nampiasaina ho fitsipika ho an'ireo mpanara-dia azy tao amin'ny sekolin-filozofia fianarany, ny Akademia: "Fantaro ny tenanao" -gnothi seauton. Avy amin'ny asa sorany dia toa hita fa nahatakatra ny tena tena izy izy, na dia tsy nisy na iray aza tamin'ireo teny nampiasainy dia nadika ho amin'ny teny Anglisy noho ny zavatra mihoatra noho ny "fanahy". Plato dia nampiasa fomba fanadihadiana mikasika ny fitadiavana ny tena tena. Misy karazana goavam-be amin'ny fanararaotan'ireo mpilalao azy; amin'ny famokarana ny vokatra mampihetsi-po. Ny fomba fiasan'ny fifampiresahana dia tsotra sy lalina. Ny mpamaky sarotra, izay tia kokoa noho ny fianarana, dia mety hieritreritra fa Plata mahonena. Mazava ho azy fa ny fomba fifanakalozan-keviny dia ny hampiofana ny saina, mba hahafahana manara-dàlana ny fisainana, ary tsy manadino ireo fanontaniana sy valiny ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra; Raha tsy izany, dia tsy ho afaka hitsara ireo fehin-kevitra azo tsoahina amin'ny fanoherana. Azo antoka fa tsy nieritreritra i Plato fa hampianarina ny fahalalany ny mpianatra. Azo inoana fa nikasa ny hananatra ny sainy amin'ny eritreritra izy, mba hahazoana manazava ny sain'ny olona amin'ny alalan'ny fisainany manokana ary hitondra fahalalana momba ny foto-kevitra. Ity, fomba fiasa Socrate ity, dia rafitra mifehy ny fifanakalozan-kevitra sy valiny mahaliana, izay raha manaraka dia hanampy olona iray hianatra ny fomba fihevitra; ary amin'ny fampiofanana ny saina mba hieritreritra mazava tsara fa nanao zavatra bebe kokoa noho ny mpampianatra hafa i Platon. Saingy tsy misy asa soratana amintsika izay ambarany izay eritreretina, na inona ny eritreritra; na ny tena tena izy, na ny fomba hahafantarana azy. Tokony hijery lavitra kokoa.
Ny fampianarana fahiny momba an'i India dia voavolavola ao amin'ny fanambarana an-tsoratra: "izany ianao" (tat tvam asi). Tsy mampiseho mazava ny fampianarana ny hoe "izany" na ny "anao"; na amin'ny fomba ahoana no ifandraisan'ilay "izany" sy ny "ianao", na hoe ahoana no hamantarana azy ireo. Na izany aza anefa, raha toa ka tokony hanana dikany ireo teny ireo dia tokony hohazavaina amin'ny teny izay azo takarina. Ny votoatin'ny filozofia indianina rehetra - ny fijerin'ny ankamaroan'ny sekolim-pianarana dia toa ny olombelona dia misy zavatra tsy mety maty ary misy foana ny ampahany amin'ny singa iray na zavatra iraisana, toy ny ranomasina migodana Ny rano dia ampahany amin'ny ranomasimbe, na toy ny fofom-batana dia iray amin'ny lelafo izay misy ny fiandohany sy ny maha izy azy; Ary koa, io zavatra maha-olona io, ity ity mpanao asa tanana ity-na, araka ny voalaza ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra, ny mpitaona na purusha, dia misaraka amin'ny universal zavatra iray fotsiny amin'ny alalan'ny voaly tsisy saina, maya, izay dia mahatonga ny mpankafy amin'ny maha-olombelona ny fisainany amin'ny maha-fisarahana azy sy amin'ny maha-olona azy; Na izany aza, nilaza ireo mpampianatra fa tsy misy ny maha-izy azy, ankoatra ny zavatra goavana manerantany, antsoina hoe Brahman.
Ny fampianarana ihany koa dia ny hoe ny sombin-drakitra tanteraka amin'ny Brahman manerantany dia samy miaina ny fisian'ny olombelona sy ny fijaliana miara-miory, tsy mahatsiaro ny fiheverana azy ho fantatry ny Brahman manerana izao tontolo izao; mifamatotra amin'ny kodiaran'ny zaza teraka sy ny fahafatesana ary ny famerenana indray ny natiora, mandra-pahatongan'ny taonjato maro, ny sombiny rehetra dia haverina indray ao amin'ny Brahman manerantany. Ny antony na ny ilàna na ny fitiavan-tanan'i Brahman mandalo ity fomba fitsaràna mafy sy mahatsiravina ity ho toy ny sombintsombiny na rantsana dia tsy nohazavaina. Tsy asehony koa hoe ahoana no ahafahan'ny Brahman manerana izao tontolo izao mahomby na mahasoa azy; na ny tombony azo avy amin'ny sombiny; na ny fomba mahasoa ny natiora. Ny fisiana maha-olombelona manontolo dia toa tsy mety mihitsy ny fitsapana tsy misy antony na hevitra.
Na dia izany aza dia misy fomba iray izay ahitan'ny olona iray mahafeno fepetra, mikatsaka "fitokanana" na "fanafahana" avy amin'ny fanandevozana ara-tsaina ankehitriny amin'ny natiora, dia mety hiantehitra amin'ny herim-po mahery vaika, na ny fijerin'ny natiora, ary mandroso aloha miala amin'ny natiora. Ny fahafahana dia tokony ho tratra, voalaza fa, amin'ny fampiharana yoga; Fa amin'ny alàlan'ny yoga dia lazaina fa ny fanabeazana dia mety ho voasazy fa ny mpitaingina, ny purusha-ilay mpilalao sarimihetsika - dia mianatra hanakana na handrava ny fihetseham-pony sy ny faniriany, ary hanaparitaka ny toetran-tsiambaratelo izay efa nopotehiny ny fisainany; Noho izany dia navotsotra tamin'ny ilàna ny fisian'ny olombelona lavitr'ezaka lavitr'ezaka, dia averina indray ao amin'ny Brahman manerantany izy.
Ao anatin'izany rehetra izany dia misy ny fahamendrehan'ny fahamarinana, ary noho izany dia tsara be. Ny yogi dia mianatra tokoa ny mifehy ny vatany ary manitsy ny fihetseham-pony sy ny faniriany. Mety hianatra hifehy ny sainy izy, ka ho afaka hahalala ny toe-javatra misy azy ao an-tokantranony izy ireo, ary mety ho fantatry ny olona tsy mahazatra izany, ary mety ho afaka hijery sy hahafantatra tsara ny toetrany izy ireo. mistery ho an'ny ankamaroan'ny olona. Azony atao koa ny mahavita mitazona fahefana matanjaka kokoa. Ireo rehetra ireo dia mametraka mazava tsara ny maha-olona azy raha oharina amin'ireo mpankafy tsy misy mpandàla. Na dia milaza aza ny rafi-pitondrana yoga hoe "manafaka", na "mitoka-monina", ny tena miseho amin'ny fisehoana amam-panahy, dia mazava ho azy fa tsy mitarika ny olona iray mihoatra ny sisin-tany. Mazava ho azy fa noho ny tsy fahatakarana ny saina.
Tsy toa hoe ny sainan'ny fahatsapana sy ny faniriana dia noraisina an-tsoratra ao amin'ny rafitry ny toe-tsaina atsinanana. Ny porofo amin'izany dia hita ao amin'ireo boky efatra nosoratan'i Patanjali's Aphorisms, sy ireo fanehoan-kevitra isan-karazany momba io asa fahiny io. Ny Patanjali dia mety ho olona ambony sy solontenan'ny filozofa ao India. Ny asa sorany dia lalina. Saingy toa azo inoana fa ny tena fampianarana marina dia efa very na notehirizina. Fa ny sutras malemy mangingina izay mitondra ny anarany dia toa manakorontana na manatanteraka ny tena tanjon'izy ireo. Ahoana no ahafahan'ny paradox iray manohy tsy tapaka nandritra ny taonjato maro, dia tsy hazava afa-tsy amin'ny fahazoana ny zavatra voalaza ao amin'ity toko ity sy ny momba ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny olombelona.
Ny fampianaran'ny Tatsinanana, toy ny filôzôfia hafa, dia mifantoka amin'ny misterin'ny tena ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ary ny misterin'ny fifandraisana misy eo amin'ny tenany sy ny vatany, ary ny natiora, ary izao tontolo izao amin'ny ankapobeny. Saingy ny mpampianatra Indiana dia tsy mampiseho fa fantatr'izy ireo hoe inona izany hoe ilay tena izy: ny mpitaona, ny purusha, ilay mpandoka tena miasa, dia mitovy amin'ny fahasamihafana amin'ny natiora: tsy misy fahasamihafana mazava eo amin'ny mpangalatra sy ny vatany izay avy amin'ny natiora. Ny tsy fahitana na fanehoana an'io fanavakavahana io dia vokatry ny fisainana manerantany na tsy fifankazahoana ny fahatsapana sy ny faniriana. Ilaina ny fanazavana sy ny faniriana amin'izao fotoana izao.
Izany dia: Ny olona rehetra dia nampianarina mba hino fa ny fahatsapan'ny vatana dia dimy amin'ny isa, ary izany fahatsapana izany dia iray amin'ireo fahatsapana. Ny fahatsapana, araka ny voalazan'ity boky ity, dia singa iray amin'ny zavaboary, zavamananaina fototra, mahatsiaro ho toy ny asany fa tsy manan-tsaina. Ny fahatsapana efatra ihany: fahitana, fandrenesana, fanandramana ary fofona; ary noho ny fahatsapana tsirairay dia misy fikambanana manokana; saingy tsy misy orana manokana hahatsapa satria fahatsapana-na dia mahatsapa amin'ny alalan'ny vatany aza izany-dia tsy avy amin'ny vatana fa tsy amin'ny natiora. Izy io dia iray amin'ireo lafiny roa amin'ilay mpankafy. Ny biby koa dia manana fahatsapana sy faniriana, saingy ny biby dia fanovàna avy amin'ny olombelona, ​​araka ny hazavaina taty aoriana.
Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny fihetseham-po sy ny faniriana dia ny hery manosika izay mitantana io karazana masomboly io. Tsy iray amin'ireo fahatsapana efatra ireo. Ny fahatsapana, ny endrik'ilay mpankato, dia ao amin'ny vatana izay mahatsapa, mahatsapa ny vatana ary mahatsapa ny fahatsapana izay nafindra tamin'ny vatana tamin'ny alalan'ny fahatsapana efatra, ho fahatsapana. Ankoatr'izany, amin'ny ambaratonga samihafa, dia mety hahatsapa ny fahatsapana miavaka, toy ny fihetseham-po, ny atmosfera, ny fanonerana; Afaka mahatsapa ny tsara sy ny ratsy izy ary mety mahatsapa ny fampitandreman'ny fieritreretana. Ny faniriana, ny endrika mavitrika, dia ny hery manosika mamindra ny vatana amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ilay mpankafy. Miara-miasa amin'ny lafiny roa amin'izany ny mpankafy: noho izany, ny faniriana rehetra dia avy amin'ny fahatsapana, ary ny fahatsapana rehetra dia miteraka faniriana.
Ny fampianarana ao Atsinanana dia manaiky ny zava-misy fa raha te hahazo fahalalana momba ny tena ao anatin'ny vatana dia tsy maintsy afahana amin'ny fisaintsainana ny fisainana, sy amin'ny fisainana diso sy ny fihetsika izay vokatry ny tsy fanarahamaso ny fihetseham-pony sy ny faniriany . Saingy tsy mihoatra ny eritreritra manerantany izany hoe ny fahatsapana dia iray amin'ireo eritreritra amin'ny vatana. Mifanohitra amin'izany kosa, milaza ny mpampianatra fa fahadisoana fahadimy ny fifikirana na ny fahatsapana; Izany faniriana izany dia avy amin'ny tena; ary ny fihetseham-po sy ny faniriana dia zavatra momba ny natiora ao amin'ny vatana. Araka io vinavina io, dia milaza ny hoe ny purusha, na ny atman-ilay mpankafy, ny fahatsapana sy ny faniriana - dia tsy maintsy manala tanteraka ny fihetseham-po, ary tsy maintsy manimba tanteraka, "mamono," faniriana.
Ankoatra ny tsy fahazoan'izy ireo ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpampianatra Indiana dia tsy manome porofon'ny fananana fahalalana na fahatakarana momba ny Triune Self. Ao amin'ny fanambaràna tsy fantatra hoe: "ianao izany", dia tokony ho voavaha ny hoe "ianao" izay niresahana dia ilay mpitaingina, ny purusha-ny olona tsirairay avy no mendrika; ary ny "ilay" izay namaritra ilay "anao" dia ny tenany manokana, Brahman. Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny mpahazo sy ny vatany; ary toy izany koa ny tsy fahombiazan'ny fanavahana ny Brahman manerantany sy ny tontolo manerantany. Amin'ny alàlan'ny foto-pampianarana momba ny Brahman manerantany no loharanom-pahalalana sy fiafaran'ireo olona samihafa rehetra, olona tsy an-tapitrisany maro no notazonina tamin'ny tsy fahalalana ny tena izy; Ary ankoatra izany, dia efa niandry, na dia naniry mafy aza, hamoy ny safidy ao amin'ny Brahman manerana izao tontolo izao izay zavatra sarobidy indrindra ho an'ny olona rehetra: ny tena maha-izy azy, ny tena maha-olona manokana azy, ankoatra ny selva tsy mety maty.
Misy harena iray tsy voafina tanteraka: Ny Bhagavad Gita, sarobidy indrindra amin'ny vatosoa any India. Ny perla any India no mihoatra ny vidiny. Ny fahamarinana natolotr'i Krishna ho an'i Arjuna dia avo dia avo, tsara tarehy, ary mandrakizay. Saingy ny vanim-potoana ara-tantara faramparany izay napetraky ny tantara an-tsehatra, ary ny foto-pinoana Vedika fahiny izay misaron-tava sy mihidy ny fahamarinany, dia sarotra ho antsika ny mahatakatra ny toetran'ireo Krishna sy Arjuna; ahoana ny fifandraisany amin'izy samy izy; inona ny anjara biraon'ny tsirairay eo amin'ny iray hafa, na ao anatin'ny vatany. Ny fampianarana ao anatin'io andalana io dia feno dikany, ary mety ho sarobidy lehibe. Saingy mifangaro sy miafina amin'ny teolojia avy amin'ny archaic sy ny fotopampianarana ara-tsoratra fa ny tena dikany dia tena miafina, ary araka izany dia mihena ny vidiny tena izy.
Noho ny tsy fahampian'ny fahamailana ankapobeny ao amin'ny filozofia tatsinanana, ary ny fisehoan-tena ho toy ny mpitari-dalana amin'ny fahalalana ny tena ao amin'ny vatana sy ny tena tena izy, ny fampianaran'ny fahiny tao India dia toa sahiran-tsaina sy tsy azo ekena . Ny iray dia miverina any Andrefana.
Ny fanoharana sy ny teny ao amin'ny Filazantsara dia manaporofo ny halemem-panahy, ny fahatsorana ary ny fahamarinana. Na dia ireo izay nomena ny hafatra vaovao aloha aza dia toa tsy takatr'izany. Ireo boky dia mivantana, tsy natao hamitahana; nefa koa milaza fa misy heviny anaty izay ho an'ireo olom-boafidy; fampianarana miafina izay tsy natao ho an'ny olon-drehetra fa ho "izay rehetra mino". Azo antoka fa feno mistery ireo boky; ary tokony heverina fa tokony hampianatra fampianarana iray izay fantatra tamin'ny olona vitsivitsy. Ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina: ireo dia mistery. Ny mistery koa dia ny Fitiavana tsy azo ivalozana ary ny fahaterahana sy ny fiainan'i Jesoa; toy izany koa ny fanomboana Azy, ny fahafatesana ary ny fitsanganana amin'ny maty. Ny mysteries, tsy isalasalana, dia ny lanitra sy ny helo, ary ny devoly sy ny Fanjakan'Andriamanitra; satria azo inoana fa ireo lohahevitra ireo dia natao ho takatry ny sainy, fa tsy toy ny marika famantarana. Ankoatra izany, ao anatin'ireo boky ireo dia misy fehezanteny sy teny izay tsy tokony horaisina ara-bakiteny loatra, fa amin'ny hevitry ny mystika; ary ny hafa dia mazava fa mety ho manan-danja ihany ny vondrona voafidy. Ankoatra izany, tsy azo eritreretina ny mihevitra fa ny fanoharana sy ny fahagagana dia azo ifandraisina amin'ny fahamarinana ara-bakiteny. Ny mistery manerana an'izao tontolo izao-saingy tsy misy na inona na inona ireo mistery. Inona izany zava-miafina rehetra izany?
Ny tanjona mazava ao amin'ny Filazantsara dia ny hampianatra ny fahatakarana sy ny fiainan'ny fiainana anatiny; fiainana iray anaty izay hamerenana indray ny vatan'olombelona ary hahafahan'izy ireo mandresy ny fahafatesana, hamerenana amin'ny laoniny ny vatana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ilay fanjakana izay lazaina fa lavo-ny "fianjerany" ho "fahotana tamin'ny fototra". dia rafitra fampahafantarana mazava tsara izay mety hahatonga mazava tsara hoe ahoana no ahafahana miaina fiainana anaty toy izao: ahoana no mety hahatonga ny olona iray ho tonga amin'ny fahalalana ny tena tena. Ny fisian'ny fampianaran-diso tahaka izao dia atolotra ao amin'ny asa soratra kristianina voalohany amin'ny firesahana momba ny tsiambaratelo sy ny mistery. Ary toa hita miharihary fa ireo fanoharana ireo dia teny filamatra, mitovy: tantara mihetsiketsika sy tarehim-pitenenana, izay manompo ho toy ny fiara tsy hampiseho ohatra tsara momba ny fitondran-tena sy ny fampianarana etikana, fa koa ny fahamarinana anaty ao anaty, toy ny ampahany amin'ny rafi-pampianarana voafaritra tsara. Na izany aza, ny Filazantsara, araka ny efa ananany amin'izao fotoana izao, dia tsy manana ny fifandraisana izay ilaina mba hamoronana rafitra; Izay efa nidina tamintsika dia tsy ampy. Ary, momba ireo mistery izay voalaza fa nafenina ny fampianaran-dry zareo, dia tsy nisy fanalahidy na code nomena fantatra nomena mba ahafahantsika mamoha na manazava azy ireny.
Ny mistery am-pitiavana sy tena manam-pahaizana momba ny fotopampianarana izay fantatsika dia i Paoly. Ny teny nampiasainy dia natao mba hampazava ny heviny amin'ireo izay niresahany; fa ankehitriny ny asa sorany dia mila dinihina amin'ny androny amin'izao fotoana izao. "Ny epistily Voalohan'i Paoly ho an'ny Korintiana," ny toko faha-15, dia manazava sy mampahatsiahy ny fampianarana sasantsasany; fepetra voafaritra mazava momba ny fiainan'ny fiainana anaty. Saingy azo lazaina fa ireo fampianarana ireo na dia tsy nanolo-tena hanoratra aza-izay mety ho azo takarina-na koa hoe very izy ireo na tsy navela tamin'ny asa soratana. Amin'ny toe-javatra rehetra, ny "The Way" dia tsy aseho.
Saingy amin'izao fotoana izao, voalaza fa misy ny fahalalahana miteny: mety hiteny tsy misy tahotra ny fahafatesana izay inoan'ny olona momba ny misterin'ny fiainana. Izay rehetra eritreretina na mahafantatra momba ny lalàm-panorenana sy ny fanatanterahana ny vatan'olombelona sy ny fahatsiarovan-tena izay miaina izany, ny fahamarinana na hevitra izay mety misy ny momba ny fifandraisana misy eo amin'ny tena maha-izy azy sy ny tena izy, ary ny làlana mankany amin'ny fahalalana- Tsy mila miafina izy ireo amin'izao andro izao, amin'ny teny miafina izay mitaky ny fanalahidy na code ho an'ny fahatakarany. Amin'ny andro maoderina, ny "fanondroana" sy ny "jamba", ny "tsiambaratelo" sy ny "fanombohana", amin'ny teny miafina manokana, dia tokony ho porofon'ny tsy fahalalana, ny fitiavan-tena, na ny fivarotana ara-barotra.
Ny endrika iray izay ahitana ny sasany amin'ireo fahamarinana ireo dia ny mason-koditra. Ny laharana Masonika dia efa antitra toy ny taranak'olombelona. Izy io dia manana fampianarana tena manan-danja; Mihoatra lavitra noho ny fankasitrahan'ny Masons izay mpiandraikitra azy ireo. Ny filaminana dia nitahiry ireo fampahalalana tranainy momba ny fanorenana vatana mandrakizay ho an'ny olona iray tsy mety maty. Ny tantara mistery afovoany dia miahiahy amin'ny fanorenana tempoly izay rava. Tena zava-dehibe izany. Ny tempoly dia tandindon'ny vatan'ny olombelona izay tsy maintsy manavao sy mamerina indray ao amin'ny vatana izay ho mandrakizay, maharitra mandrakizay; vatana iray izay mety ho toeram-ponenana sahaza ho an'ilay tsy mpino tsy mety maty. Ny "teny" izay "very" dia ilay mpankafy, very tao amin'ny vatany-ny sisa tavela tamin'ny tempoly taloha; fa izay no hahatsara ny vatany indray ary ny tompon'andraikitra no mifehy azy io.
Ity boky ity dia mitondra anao misimisy kokoa, fahazavana bebe kokoa amin'ny eritreritrao; Fahazavana hitady ny "lalanao" amin'ny alalan'ny fiainana. Ny fahazavana entin'izany anefa dia tsy fahazavana loatra; fahazavana vaovao izany; vaovao, satria, na dia teo aminareo aza izy, dia tsy fantatrao izany. Ao amin'ireo pejy ireo dia antsoina hoe Fahazavana Mahazatra ao anatiny; Izany no fahazavana izay afaka mampiseho anao ny zavatra toy ny azy, ny Hazavan'ny Intelligence izay mifandray aminao. Izany dia noho ny fisian'ity hazavana ity izay azonao eritreretina amin'ny famoronana ny eritreritra; ny eritreritra hifehezana anao amin'ny zavatry ny natiora, na hanafaka anao amin'ny zavatry ny natiora, araka izay safidinao sy sitraponao. Ny fisainana marina dia ny fitazonana sy ny fitohizan'ny fahazavana mahazatra ao anatin'ny foto-pisainana. Ny eritreritrao no mahatonga anao ho anjaranao. Ny fomba fisainana tsara dia fomba iray hahafantarana ny tenanao. Izay afaka manoro anao ny lalana, ary izay afaka hitarika anao amin'ny lalanao, dia ny Fahazavan'ny Intelligence, ny Fahazavana Mahalala ao. Ao amin'ny toko taty aoriana dia nilazana ny fomba tokony hampiasana an'io hazavana io mba hahazoana fahazavana bebe kokoa.
Ny psychologists ankehitriny dia maniry ny tsy hampiasa ny teny hoe soul, na dia teo amin'ny fampiasana ankapobeny tamin'ny fiteny anglisy nandritra ny taonjato maro aza. Ny anton'izany dia ny hoe izay rehetra lazaina momba ny atao hoe fanahy, na ny zavatra ataony, na ny tanjony dia manjary tsy dia mazava loatra, tsy mahagaga ary mampisafotofoto, mba hanomezana toky ny fandalinana siantifika momba izany. Ny mpitsabo psikôlôgy kosa dia raisina ho lohahevitra amin'ny fandalinany ny milina biby sy ny fihetsika ataony. Efa hatry ny ela no nahatakatra sy nanaiky ny olona fa ny olona dia "vatana sy fanahy ary saina". Ny olona iray dia misalasala fa ny vatana dia zavamananaina biby; Fa ny fanahin'ny fanahy sy ny fanahy dia be loatra ny fisalasalana sy ny fisaintsainana. Amin'ireto foto-dresaka manan-danja ireto dia mazava ho azy ity boky ity.
Ny boky dia mampiseho fa ny fanahy velona dia zavatra marina sy ara-bakiteny. Asehony fa ny tanjony sy ny asany dia tena manan-danja eo amin'ny drafitra manerantany, ary tsy azo ekena izany. Hazavaina fa ny antsoina hoe fanahy dia singa natiora iray - singa fototra iray, singa iray amin'ny singa iray; ary io antokon'olom-bolo-tsaina tsy manam-pahaizana io no fivoahana indrindra amin'ireo singan-javamaniry rehetra ao amin'ny fananganana ny vatana: izy io no singa fototra ao amin'ny vondrona misy ny vatan'ny olona, ​​rehefa mandroso izany asa izany rehefa avy nianatra lava be tao anatin'ny asa fohy mampiditra ny natiora. Noho izany, ny habetsaky ny lalàna rehetra momba ny natiora, ity sampana ity dia mahafeno fepetra hiantsoana ny tale manara-maso ny natiora amin'ny rafitra ataon'ny olona; Amin'ny maha-izy azy dia manompo ny tsy mety maty amin'ny alàlan'ny fanavaozana rehetra azy izy amin'ny fananganana vatana vaovao ara-nofo ho an'ny mpankafy mba hiditra ao, ary ny fitazonana sy fanamboarana io vatana io raha toa ka mety hila ny tanjon'ny mpikarakara ny asa, mieritreritra.
Ny vatanao dia ara-bakiteny vokatry ny fisainanao. Na inona na inona mety hiseho amin'ny fahasalamana na aretina, dia ataonao izany amin'ny fisainanao sy ny fahatsapanao ary ny fanirianao. Ny vatana nofo aman-tenanao ankehitriny dia fanehoana ny fanahy tsy mety maty, ny fofon'ainao; Izany dia fanararaotana ny eritreritra amin'ny fiainana andavanandro. Izany dia fitantarana hita maso momba ny eritreritrao sy ny zavatra ataonao ho toy ny mpankato, hatramin'izao. Ao amin'izany no misy ny mikraoba ny fahalavorariana sy ny tsy fahafatesan'ny vatana.
Ny herin'ny firaisana dia zava-miafina hafa izay tokony hamaha ny olombelona. Tokony ho fitahiana izany. Ny olona kosa matetika no mahatonga azy ho fahavalony, ny devoly, izay miaraka aminy ary tsy afaka miala aminy. Ity boky ity dia mampiseho fa, amin'ny fisainana, ny fampiasana izany ho hery lehibe ho an'ny tsara izay tokony ho azy; sy ny fomba amin'ny fahatakarana sy fifehezan-tena mba hamerenana indray ny vatana ary hanatontosana ny tanjon'ny idealy sy ny idealy amin'ny fandrosoana.
Ny olombelona tsirairay dia mistery indroa: ny misterin'ny tenany, ary ny misterin'ny vatana izay ananany. Izy no manana ny lock sy ny fanalahidy ho an'ny mistery indroa. Ny vatana dia ny fanidiana, ary izy no fanalahidy ao amin'ny tranokely. Ny tanjon'ity boky ity dia ny milaza aminao ny fomba hahatakaranao ny tenanao ho toy ny fanalahidin'ny misterin'ny tenanao; ahoana no hahitana ny tenanao ao amin'ny vatana; Ahoana no ahafantarana sy hahafantatra ny tena tanjonao ho toy ny tena fahalalana; Ahoana ny fampiasanao ny tenanao ho toy ny fanalahidy hanokatra ny tranokala izay ny vatanao; ary, amin'ny vatanao, ny fomba hahatakarana sy hahafantarana ny misterin'ny natiora. Ao ianao, ary ianao no mpandraharaha, ny masombolin'ny karazana tsirairay; Izany dia mihetsika sy maneho hevitra amin'ny ary mifandray amin'ny natiora. Rehefa mamaha ny misterin'ny tenanao ianao amin'ny maha-mpankafy ny fahalalanao manokana sy ny mpandraharaha amin'ny vatanao dia ho fantatrao-amin'ny antsipiriany tsirairay ary amin'ny ankapobeny-fa ny asan'ny vatan'ny vatanao dia lalàna momba ny natiora. Ho fantatrao avy eo ny fantatra sy ny lalàna tsy fantatra momba ny natiora, ary afaka miara-miasa amin'ny masom-pitondrantena masiaka amin'ny alalan'ny vatany tsirairay izay misy anao.
Ny fotoana dia ny fiovan'ny singa, na ny vondron'ny tarika, amin'ny fifandraisan'izy samy izy. Io famaritana tsotra io dia mihatra eny rehetra eny sy eo ambanin'ny fanjakana na ny toe-javatra tsirairay, saingy tokony ho raisina ary ampiharina alohan'ny hahatakaran'ny olona izany. Ilay mpankafy dia tsy maintsy mahatakatra ny fotoana ao anatin'ny vatana, mifoha. Ny fotoana dia miavaka amin'ny tontolo hafa sy ny fanjakana. Amin'ny fotoana mahatsikaiky dia toa tsy mitovy ny mifoha, toy ny hoe amin'ny nofinofy, na mandritra ny torimaso lalina, na rehefa maty ny vatana, na mandalo ny taonan'ny fahafatesana, na miandry ny fanorenana sy ny fahaterahana ny vatana vaovao izay handova ny tany. Ny iray amin'ireo vanim-potoana ireo dia manana "hatrany am-piandohana", fifandimbiasana, ary fiafarana. Mipoitra ny fotoana ao anatin'ny fahazazany, mihazakazaka amin'ny tanora, ary mihazakazaka mihamitombo haingana hatrany amin'ny fahafatesan'ny vatana.
Ny fotoana dia ny tranonkalan'ny fiovana, voarafitra amin'ny mandrakizay hatrany amin'ny vatan'ny olombelona. Ny felam-pahefana izay ampiasain'ny tranonkala dia ny endrika fofona. Ny saina dia ny mpamorona sy ny mpandraharaha ao amin'ny tranombakoka, ny mpandroba ao amin'ny tranonkala, ary ny mpanamboatra ny voaly antsoina hoe "lasa" na "manatrika" na "hoavy". Ny fisainana dia mahatonga ny fotoan-tsasatra, mitodika ny tranonkalan'ny fotoana, mieritreritra ny mamantatra ny sarin'ny fotoana; ary ny saina dia misaina ny fisainana.
Ny fiantrana dia zava-miafina iray hafa, ny lehibe indrindra sy ny halalin'ny zava-miafina rehetra. Ny teny hoe fahatsiarovan-tena dia miavaka; Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto Ny mitovy aminy tsy hita amin'ny fiteny hafa. Ny lanjany sy ny dikany manan-danja kosa dia tsy ankasitrahana. Izany dia ho hita amin'ny fampiasana fa ny teny dia natao hanompo. Mba hanome ohatra sasantsasany momba ny fampiasana tsy ampiasana azy: Henon'ny teny toy ny hoe "ny fahatsiarovako" sy ny "fahatsiarovan-tenan'ny olona"; sy amin'ny fahatsiarovan'ny biby, ny fahatsiarovan-tena, ny ara-batana, ny saina, ny cosmic, ary ny karazana fahatsiarovan-tena hafa. Ary voalaza ho fahatsiarovan-tena ara-dalàna, ary lalina sy lalindalina kokoa, ary ambony sy ambany, anatiny ary ivelany, ny fahatsiarovan-tena; ary ny fahatsiarovan-tena feno sy ampahany. Ny fanamarihana ihany koa dia naheno momba ny fiandohan'ny fahatsiarovan-tena, ary ny fanovana ny fahatsiarovan-tena. Ny iray maheno ny olona milaza fa efa niaina na nitombo ny fitomboany, na ny fanitarana, na ny fivoahana, ny fahatsiarovan-tena. Ny fampiasana matetika ny teny dia amin'ny fehezanteny toy ny hoe: ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena, ny mitazona ny fahatsiarovan-tena; mba hiverina, hampiasa, hampitombo ny fahatsiarovan-tena. Ary ny iray dia maheno, fanampiny, ny fanjakana samihafa, ary ny fiaramanidina, sy ny ambaratonga, ary ny feon'ny fieritreretana. Ny fahatsiarovan-tena dia lehibe loatra ka tsy mahafeno fepetra, voafetra, na voatondro. Noho ny maha-zava-dehibe an'io boky io, io boky io dia mampiasa ny fehezanteny: mba hahatsiaro, na amin'ny, na amin'ny. Hazavaina: na inona na inona fahatsiarovan-tena dia mahatsiaro zavatra sasantsasany, na tahaka ny inona izany, na misaina ao anaty paharetana.
Mandritra ny fiainanao manontolo eto an-tany dia mitady fatratra ianao, miandry na mitady olona na zavatra tsy hita. Mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ianao fa raha azonao atao fotsiny ny mahita izany, dia ho afa-po ianao. Mahatsiaro ny fahatsiarovana ny vanim-potoana; Izy ireo no fahatsapana ny fahatsiarovanao taloha; Mandrisika ny herim-pamoretana tsy mitsaha-mitombo eran'izao tontolo izao izy ireo sy ny fahabangana ary ny tsy fahombiazan'ny ezaky ny olombelona. Azonao atao ny mikatsaka ny hahafa-po izany fahatsapana amin'ny fianakaviana izany, amin'ny fanambadiana, amin'ny ankizy, amin'ny namana; na amin'ny asa, ny harena, ny zava-niainana, ny fahitana, ny voninahitra, ny fahefana ary ny hery-na ny tsiambaratelo hafa ao amin'ny fonareo. Saingy tsy misy na inona na inona amin'ireo fahatsapana afaka mahafa-po tokoa izany faniriana izany. Ny antony dia very ianao-dia ampahany very saingy tsy azo sarahina amin'ny Triune Self tsy mety maty. Taloha lasa izay, ianao, toy ny fahatsapana sy faniriana, ny ampahany anjara, dia nandao ny ampahany amin'ny saina sy ny ampahany amin'ny Triune Self. Noho izany dia very tamin'ny tenanao ianao satria, raha tsy misy fahatakarana ny momba ny Triune Self, dia tsy azonao ny tenanao, ny fanirianao ary ny very anao. Noho izany dia nahatsiaro ho irery ianao indraindray. Efa hadinonao ireo faritra maro izay efa noraisinao matetika teto amin'ity izao tontolo izao ity, toy ny maha-olona anao; ary nanadino koa ny tena hatsaran-tarehy sy ny hery izay nahatsiarovanao fony ianao niaraka tamin'ny mpandinika sy ny mpampiasa anao tao amin'ny "Realm of Permanentence". Fa ianareo, amin'ny maha-mpahary anareo, dia maniry ny handanjalanjana ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny vatana tonga lafatra, mba hahafahanareo miaraka amin'ny mpandinika sy ny ampahany fahaizana, toy ny Triune Self, ao amin'ny sehatry ny faharetana. Ao amin'ny soratra tranainy dia nisy fiaraha-miombon'antoka tamin'io fialan-tsasatra io, tamin'ny fehezanteny toy ny "fahotana tany am-piandohana", "ny fahalavoan'ny olona", toy ny avy amin'ny fanjakana sy ny fanjakana izay mahafa-po. Ny fanjakana sy ny fanjakana izay niainganao dia tsy afaka nitsahatra; Mety ho velona indray izy io, fa tsy aorian'ny fahafatesana.
Azonao atao ny mametraka ireo lesona ireo ho an'ny fiainam-boly maro arahinao, na mianatra azy ireo raha vantany vao tadiavinao-izany dia ny manapa-kevitra anao; Fa mandritra ny fotoana hianaranao izany.